कोरोना जितेका इलामेको अनुभव बेलिबिस्तार – Green Ilam
लन्डन । ब्यक्तिगत दुःख सुख भन्दा पनि सात समुन्द्रपारी संसार कै सम्बृद्ध भनिएको देश बेलायत जहाँ कोरोनासँगको जम्काभेट पश्चात जिजीविषालाई जीवित राख्न कति कठिन भयो भन्ने यो अनुभव । कोरोनासंग लडिरहेका र लडनूपर्ने अवस्थामा रहेकाहरुलाई कसरी लडियो भन्ने बारेमा थप जानकारी भयो । कोरोनासँग लडन सहयोग पुग्यो भने आफुलाई अलिकति भएपनि सन्तुष्टि मिल्नेछ भन्ने बिस्वास लिएको छू ।
सन्दर्भलाई सुरुदेखि नै जोड़न पाए अहिलेसम्मको जम्काभेट र बिजयबीचको त्रासदी प्रस्ट्याउन सजिलो हुनेछ । सर्वप्रथम कोरोनाको प्रकोपको शुरुआत देखिने गरी बेलायतमा सुरुभयो । सरकारी नीति अनुसार अत्यन्तै गाह्रो अवस्थामा मात्र एनएचएसको १११ मा सम्पर्क गर्न सकिने र जीवन नै जोखिममा पर्न जाने संभावनामा मात्र इमरजेन्सी सर्भिस ९९९ लाइ खबर गर्न सकिने स्वास्थ्य गाईड लाइन छ । डाक्टर कहाँ जान नसकिने भन्नासाथ डार्टफोर्ड नेपाली समाजको अध्यक्षको हैसियतमा तत्काल कार्यसमितिको बैठक बोलाएर पर्न सकने संभावित असर र जरूरतको बारेमा साथीहरुलाई अवगत गराए । संभवत टिओआर सहितको कोरोनासंग जूझने पहिलो औपचारिक प्रयास स्वरुप हामीले स्वयं सेवक टिम र स्वस्थ्य टिमको रुपमा २ वटा औपचारिक टिम सहितको प्रारूप तय गरेका थियौं । एकातिर स्वयंसेवक टिमले समन्वयात्मक रुपमा लॉजिस्टिक सपोर्ट गर्दै रह्यो भने अर्को तिर घरमै आइसोलेसन बसेदेखि अस्पताल जानू पर्ने अवस्था बिचको अत्यन्तै सम्बेदंशील अवस्थामा स्वास्थ्य टिमले कन्सलट्यान्ट डाक्टरहरुको सुझावसहितको सहयोग गरिरह्यो । हाम्रो यो अप्रोच धरै समुदायलाई मन परेर यस्तै गरिरहनु भएको जस्तो लाग्छ । बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावास, काउन्सिल तथा गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेका साथीहरुबाट पनि उत्साहपूर्ण प्रतिकृया आइरह्यो । हामीले क्षमताले भ्याए सम्म सहयोग जारी राख्यौ ।
यसैबिच, मलाई निक्कै कडा खोकीले समायो । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा मैले केही नढाटिकन हाम्रो सहयोगी टिममा अपडेट गर्न थाले । धेरै साथीहरुले मलाई स्वास्थ्य लाभको कामना र प्रत्येक ६ घण्टामा सिटामोल लिन सुझाब दिनु भयो । परिवारको सल्लाह, आफ्नो ज्ञान, साथीहरुको सल्लाह र एनएचएसको सल्लाह अनुसार काम गर्दै गए । तर ६ अप्रिल दिउँसो अत्यन्तै गाह्रो महशुस भयो । श्वासप्रश्वास लिन मुस्किल पर्याे, यो कुरा छोरा जेनिसले एकदम नै नोटिसमा लिएको रहेछ र रोशू (श्रीमती)ले ९९९ कल गर्न भनेपछि मलाई त कुरा गर्न गाह्रो भैरहेकोमा जेनिसले नै कुरा गरे । छोराले फोन राखेको १५ मिनेटमै एम्बुलेन्स घरमा आइपुग्यो । त्यो बेला सायद अलि ढिला भएको भए मेरो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा भन्न सक्दिन थिए । मलाई तत्काल ड्यारेन भ्याली अस्पताल डार्टफोड इमरजेन्सीमा पुर्याइयो । चेकजाँच गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखियो ।
यही समय थियो मेरो कोरोनासँगको जुझाइ र मृत्युसँगको करीब साक्षात्कार ! शरीरमा अक्सिजनको कमि हुन थालेको र लंग्समा इन्फेक्शन देखिएको हुँदा एन्टिबायोटिक लिने र घरमै आराम गर्ने सलाह बमोजिम अस्पतालबाट भोलि पल्ट बेलुकी घर आए । घर त आए तर पनि ज्वरो र खोकी निको भएको होइन, नेपालबाट आफन्तहरु बुवाआमालाई धेरै ढाट्न सकिएन । हाम्रो संयोजक आशा फेराली बैनीलाई यथार्थ बताइदिनु अनुरोध गरे । आसा बैनीले बुवाआमालाई मेरो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा विस्तृतमा बुझाएपछि वहाँहरु पनि आत्तिन छाड्नु भयो । त्यसपछि मैले धेरै आनन्द महशुस गरे । तैपनि निरन्तरता परिवारसँग सम्पर्कमा रहे ।
स्वास्थ्य टिमको साथीहरुसँग नियमित सम्पर्कमा नै थिए । यता साथीहरुबाट सोधखोज हुनथाल्यो यत्तिकैमा श्रीमती रोशुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरहरु देखापर्न थाल्यो बाबु जेनिसलाई पनि ज्वरो देखियो । घरका सबै बिमारी भए । परिवारमा श्रीमति र छोरा जेनिसलाई पनि कोरोना देखियो । हामी छुट्टाछुट्टै कोठामा आइसोलेसनमा बस्न थाल्यांै । परिवारको सदस्यवीच भेटघाट गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौं । यस्तो बेला हाम्रो स्वयंसेवक टिम र स्वस्थ्य टिमको अमूल्य योगदानको जति प्रसंशा गरेपनी कमै हुन्छ अहिले पनि रोशू सिटामॉल लिईरहेकि छिन । अव श्रीमति रोशुको स्वास्थ्यमा सुधार भईरहेको छ । छोरा जेनिसले चाँहीले कोरोना माथि जित हासिल गरिसकेको छ । म लड्दै छु । त्यो कोरोनालाई म पछारेर छाड्छु भन्ने हिम्मत मैले लिएको छु । यो कोरोना विरुद्धको लडाईमा मेरो अनुभवलाई राख्दा हाम्रो समुदायलाई ठुलो सहयोग हुने आशा मैले लिएको छु ।
कोरोना सँगको युद्धमा जित्नका लागि सहयोगी भएका केहि महत्वपूर्ण बुँदा सेयर गर्न चाहान्छु ।
१. आत्मा बिश्वासः
यो गाह्रो कुरा हो । तर मैले विमारीको अवस्था भोगिसकेका साथीहरुको लड़ाइलाई नजिकबाट हेरिरहेको थिए । विशेषतः बिनोद न्यौपाने , माधव पराजुली, शेखर वाग्ले, अर्जुन कटुवाल र भर्खरै गोरख कार्की लगायतको कोरोना विरुद्धको लड़ाइले मलाई सधै आत्मबल प्रदान गर्यो । अर्को कुरा, समुदायको नेतृत्वमा रहेर आउन सक्ने संभावित खतरासँग जुध्न आफै तैयार भएकाले मलाई हार्ने सुविधा थिएन । त्यही हिम्मत र विश्वासले कोरोनासँग म लडिरहे जसले लडन पनि सजिलो भयो । यसरी नै आदरणीय बेलायतस्थित महामहिम राजदूत दुर्गावहादुर सुवेदी दाई जसले प्रत्येक दिन सन्देश वा फोन मार्फत जानकारी लिने र आत्मबल बढाउन प्रेरित गरिरहनु भयो । म वहाँप्रति हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु ।
२. स्वास्थ्य टिमको सुझाव अक्षरश पालन ः
कुन बेला ९९९ डायल गर्ने भन्ने अति संवेदनशील समय थाहाँ हुन नसक्दा ज्यान जान सक्ने अनुभव मैले गरे । विशेषतः आइसोलेशनको स्पेशल वार्डमा कार्यरत हाम्रा स्वस्थ्य टिमका साथीहरु तथा कन्सलट्यान्ट डाक्टरहरु, स्वास्थ्य संयोजक सुनीता थापा गौतम र डा. लोहनीज्यूको अमूल्य सुझावलाई मैले अक्षरशः पालना गरे । वहाँहरुका ती सल्लाह मेरो लागि अति नै महत्वपूर्ण रहे । वहाँहरुले पनि काममा हुँदा वा घरमा रहँदा कुनै पनि समय झर्काे नमानि सुझाव दिनु भयो अनि मैले पुनःजन्म प्राप्त गर्न सफल भएको छु ।
३. अनन्य मित्रहरुको निर्विकल्प सहयोग :
हिजो सम्म पनि हामीले मित्रहरुको चुल्हाको खानेकुरा खाइरह्यौ । कहाँ पाक्यो, कसरी पाक्यो ? हामीलाई थाहा भएन । त्यो आत्मियता र मित्रता मैले डार्टफोर्डमा पाए । हाम्रो परिवारलाई दुखका बेला खाना खुवाएर सहयोग गर्ने डिएनसी स्वयमसेवी टिमका आशा , भरत, ध्रुर्ब, दीपा, अमृता भाउजु, रेनू भाउजु, शर्मिला बैनी प्रति आभारी छु । त्यस्तै, लॉजिस्टिक टिममा रहेर सहयोग गर्नुहुने दीपक सर , डा. तेजेन, भरत, धनजी, शीतल बैनी, पवनज्योति र राजन खकुरेलजीको जति प्रसंशा पनि कमै हुन्छ ।
४. अपनत्व :
हामीलाई चाडै ठीक गराउने अर्को औषधि चै आफन्त तथा साथीहरुको माया प्रार्थना स्नेह नै हो । धेरैजनाले हामीलाई सोधी खोजी गर्नुभयो की हामीलाई अलिकति पनि एक्लो महसूस गर्न परेन । यतिवेला हामीले विमारीको बारेमा चिन्ता गर्नुे भन्दा पनि फोनमा कुरा गर्दै, असल कुरा सोच्दा सोच्दै धेरै जाति भईसकेका छौ । नेपाल तथा विश्वभरका आफन्त र प्रियजनहरुको हौसला, माया, प्रेम जस्तो मिठो औसधि केहि हुन्न रहेनछ । त्यो हामीलाई विमारी परेका दिन देखि नै पायौं ।
अन्तमा : एउटा अनुरोध गर्न चाहान्छु । कोरोनाको शंका लागेमा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा नजिक साथी वा स्वयंमसेवी टोलीसँग खुलेर कुरा गर्नुहोस । मिडियामा जाने वा नजाने त्यो आ- आफ्नै अवस्था हुन्छ । मेरो विनम्र अनुरोध छ । स्वाथ्य अवस्था कृपया सेयर गर्नुहोस । यो नयाँ भाइरस हो सबैले अनुसन्धान गरिरहेका छन । यो भाइरसको उपचार गर्न औषधी पत्ता लागेको छैन । सकारात्म सोच नै यसको उत्तम औषधी हो । जीवन अनमोल छ अलिकति पनि चान्स नलिनुस । डार्टफोर्डको कुरा गर्दा हाम्रा स्वास्थ्य टिममा स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गरेका योग्य साथीहरु हुनुहुन्छ । वहाँहरुलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुहोस, अफ्ट्यारो पर्दा त हो नि हामीलाई सबै चाहिने । अरू बेला त सबैले आफ्नै तरीकाले जीवन चलाएकै छन् । समुदाय वा समाजमा हामी बाधिएकै अप्ठ्यारो बेलामा एक आपसमा सहयोग लिन र दिन हो । सबैलाई पुनः एकपल्ट भित्री हृदयदेखि नै हार्दिक आभार तथा नमन ब्यक्त गर्न चाहन्छौ ।
Tags: CoronaGejen karuwalIlam
एक महिनादेखि दुवाईमा इलामेको शव अलपत्र